Gbasara Anyị - Owon Technology Inc.
Usoro owuwu ihe Smart
Nlekọta Ndị Agadi
Igwe mmiri USA
Thermostat nke Europe
IoT Ngwaọrụ Nhazi
Ntinye igwe ojii nke onwe
OWON ZigBee Ngwaọrụ gaa 3rd Party Gateway
OWON Gateway na 3rd Party Cloud
OWON Cloud ruo 3rd Party Cloud
OWON Teknụzụ (akụkụ nke LILLIPUT Group) bụ ISO 9001: 2015 gbaara Original Design Manufacturer ọkachamara na imepụta na imepụta ngwaahịa elektrọnik na nke IoT kemgbe 1993. Akwadoro site na ntọala siri ike na kọmputa agbakwunyere, ngosipụta LCD na teknụzụ nkwukọrịta ikuku, OWON awade ma ọkọlọtọ IoT ngwaahịa na omenala IoT ngwọta maka utilities, Telco si, USB rụọ, home ewu ụlọ, management ụlọ, ngo, usoro aggregators, na retail ọwa.
Na ọkwa ngwaọrụ, na mgbakwunye na ịnye ụdị ọkọlọtọ dị iche iche, OWON na-echekwa ma na-arụpụta iji mee ka ndị ahịa chọrọ ka ha daba na ebumnuche teknụzụ ha. Na sistemụ sistemụ, n'elu sistemụ ụlọ na azụmahịa nke IoT, OWON na-enyekwa Open-API zuru oke maka njikọta sistemụ iji nweta ebumnuche azụmaahịa pụrụ iche nke ndị mmekọ anyị.
—— Ọkachamara ODM Ọrụ ——
- Nyefee echiche gị na ngwaọrụ ma ọ bụ sistemụ a na-ahụ anya
OWON nwere nnukwu ahụmịhe n'ichepụta na ịhazigharị ngwaọrụ eletrọniki akọwapụtara nke ndị ahịa mkpa. Anyị nwere ike ịnye ọrụ ntanetị R&D zuru ezu gụnyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nhazi, ngwaike & PCB imewe, ngwa ngwa & ngwanrọ, yana ntinye usoro.
—— Ọrụ Nrụpụta Ahịa Na-efu ——
- Nyefee ọrụ ngwugwu zuru ezu iji mezuo ebumnuche azụmahịa gị
OWON na etinye aka na imepụta olu nke ngwaahịa elektrọnik ahaziri iche na nke ahaziri kamgbe afọ 1993. N'ime afọ ndị a, OWON enwetawo ahụmịhe bara ụba na amamịghe na nrụpụta ngwaahịa, dịka Mass Production Management, Supply Chain Management, Total Quality Management, wdg.
Strategy Atụmatụ na-adabere na teknụzụ nke na-enyere ike ụda nke R&D na mmejuputa teknụzụ.
● afọ 20 nke n'ichepụta ahụmahụ kwadoo na a tozuru okè na oru oma ọkọnọ yinye.
Resource ablekwụsi ike ma na-agbanwe agbanwe ọrụ mmadụ yana itinye aka na ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ihi ọdịbendị ụlọ ọrụ nke "Ezi obi, ,kekọrịta na Successga nke Ọma".
● Nchikota nke "International Accessibility" na "emere na China" na-ekwe nkwa afọ ojuju ndị ahịa dị elu na-enweghị ịchụ àjà ọnụ ahịa.
- Comzọ Azụmaahịa 130, Ukpa, CA 91789, USA
- 30 Via Renzo Dr., Richmond Hill, NA, Canada
Ejikọtara Homelọ na IoT: Market Opportunit ...
Ndụ Ka Mma na OWON Smart Home
OWON na 7th China (Shenzhen) Internati ...
OWON ga-abụ na 7th China (Shenzhen) I ...
ZigBee 3.0: Ntọala maka Intern ...